Global Voices teny Malagasy » Mety hihena ny taranaka rajako ao Oganda · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 20 Aogositra 2018 8:13 GMT 1	 · Mpanoratra Samuel Maina Nandika Liva Andriamanantena
Sokajy: Afrika Mainty, Oganda, R.D. Kongo, Ady & Fifandirana, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana
(Marihina fa tamin'ny 23 Janoary 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Efa fantatra hatramin'izay fa manodidina ny 700 ny isan'ny Rajako An-tendrombohitra  mbola velona any anaty ala amin'izao fotoana (2009)- ny 336 amin'izy ireo no any Oganda  – saingy nisy ny fanadihadiana vaovao navoaka tao amin'ny gazety New Scientist  izay nilaza fa mety ho kely ny fanantenana momba izany.
Ireo rajako miisa 336 izay voalaza fa monina ao amin'ny valan-javaboarim-pirenen'i Bwindi any Oganda izay tsy azo idirana dia fantatra tamin'ny alàlan'ny fampiasana ny fomba iray hanisana ny isan'ny akany atsangan'ireo rajako mahavariana isak'alina. Nanondro ny fanadihadiana vaovao fa mety hampihoatra ny isan'ireo rajako ity fomba nampiasaina ity satria manangana akany mihoatra ny iray isak'alina ny rajako.
Nilaza momba ilay tatitra i Paula Kahumbu raha nanoratra tao amin'ny bilaogy Gorilla Protection  :
Ny fitiliana ADN vao haingana avy amin'ny tain-drajako izay notarihin'i Katerina Guschanski avy ao amin'ny Ivontoerana Max Planck ho an'ny Fivoaran'ny Antrôpôlôjia ao Liepzig, Alemaina, … no nampiseho fa vitsy dia vitsy ny rajako an-tendrombohitra raha ny tena marina. Nahita porofo tamin'ny codes génétiques miisa 302 samihafa na tamin'ireo rajako tsirairay izy, ary nilaza fa mampitombo ny habetsahan'ny rajako ny fomba fanisana ny akany satria manangana akany mihoatra ny iray ny rajako sasany.
Nametraka ny isan'ny rajako ho 340 ny fitiliana ADN teo aloha – tamin'ny taona 2007 . Midika izany fa nihena 10% ny isan'ny Bwindi. Na izany aza, mitandrina sy tsy mbola vonona ireo mpahay siansa ny hanambara fa nihena na tsy nihetsika ny isan'ny rajako.
Tsy vaovao tsara izany raha nihena tokoa ny isan'ny Bwindi. Hoy i Paula:
Vaovao ratsy ho an'ny rajako an-tendrombohitra raha marina tokoa fa nihena ny isan'ny Bwindi- Tombanana eo ho eo amin'ny 700 eo fotsiny ny isan'izy ireo, milaza ity salan'isa ity fa nihena 5% farafahakeliny ny isan'ny rajako manerantany.
Mandritra izany fotoana izany, niakatra ho 10 ny isan'ny maty tamin'ny fanafihan'ny Lords Resistance Army-LRA tao amin'ny Valan-javaboary Nasionaly Garamba tamin'ny 2 Janoary 2009, hatramin'ny nitateranay izany tamin'ny 14 Janoary  sy tamin'ny 11 Janoary . Olona telo no mbola tsy hita popoka araka ny tatitra tao amin'ny blaogy Baraza . Efa voamarina ihany koa ireo niharam-boina ary ity bilaogy manokana ao amin'ny Baraza ity dia mitanisa ireo maty, naratra ary tsy hita.
Naneho hevitra momba ny fisamborana nataon'ny tafika Roandey an'i Laurent Nkunda , ilay Jeneraly mpikomy sady lehiben'ny mpikomy, ihany koa ny bilaogy Gorilla Protection, araka ny notaterin'ny BBC , izay mety ho vaovao tsara ho an'ny fiarovana ny rajako.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2018/08/20/124875/
 Rajako An-tendrombohitra: http://en.wikipedia.org/wiki/Mountain_Gorilla
 nanoratra tao amin'ny bilaogy Gorilla Protection: http://gorilla.wildlifedirect.org/2009/01/22/mountain-gorilla-populations-have-declined/
 ny fitiliana ADN teo aloha – tamin'ny taona 2007: http://www.sciencedaily.com/releases/2007/04/070420143329.htm
 14 Janoary: https://globalvoicesonline.org/2009/01/14/the-killing-continues-in-dr-congos-wildlife-parks/
 11 Janoary: https://globalvoicesonline.org/2009/01/11/wildlife-tragedies-and-bizarre-happenings-at-wildlifedirect-blogs/
 araka ny tatitra tao amin'ny blaogy Baraza: http://baraza.wildlifedirect.org/2009/01/22/6-still-missing-after-lra-attack-in-garamba/
 Naneho hevitra momba ny fisamborana nataon'ny tafika Roandey an'i Laurent Nkunda: http://gorilla.wildlifedirect.org/2009/01/23/nkunda-arrested/
 araka ny notaterin'ny BBC: http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7846339.stm